Sarontava balinika | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Bali, Indonezia
Iray amin'ireo fahatsiarovana mahazatra indrindra azonao entina mody avy any amin'ny dia any Indonezia ny sarontava tena mampiavaka.
Izy ireo dia fantatra amin'ny hoe sarontava bali Ary na dia azonao atao aza ny mividy azy ireo ho fahatsiarovana sy ahantona amin'ny rindrina ao an-tranonao, dia manan-danja tokoa amin'ny kolontsain'io tany io izy ireo. Andao hojerentsika ny niandohany, ny fampiasana azy ary ny dikany mba tsy hividianana zavatra.
1 Tantaran'ny sarontava Bali
2 Saron-kazo Bali androany
3 Topeng sarontava
4 Ny sarontava Barong
Tantaran'ny sarontava Bali
Ireo sarontava ampiasaina amin'ny dihy indoneziana nentim-paharazana izay mamerina ny tantaram-bahoaka izay mihodina manodidina ny mahery fo, angano, mpanjaka ary maro hafa. Misy mpandihy, mpilalao sarimihetsika ary mpitendry zavamaneno eny an-tsehatra ary inoana fa na dia efa antitra aza ireo dihy ireo dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX ny fampiasana sarontava aminy.
Nantsoina izy ireo hanafina amin'ny teny indoneziana ary rehefa mandeha ny fotoana dia nampiasaina tamin'ny dihy laika sy fombafomba ara-pivavahana izy ireo. Ny niandohany dia nanomboka tamin'ny dihin'ny foko indoneziana, dihy manome voninahitra ny razana sy andriamanitra.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanomboka nisaron-tava ireo nisolo tena ny irak'ireo andriamanitra. Androany dia afaka mahita ianao sarontava natao ho an'ny fizahan-tany fa be kosa ny sarontava izay heverina ho sangan'asa ary samy manana ny fombany ny vohitra Bali tsirairay.
Saron-kazo Bali androany
Na dia marina aza fa samy manana ny endriny misaron-tava ny tanàna tsirairay I Mas dia tanàna malaza indrindra amin'ity asa sokitra ity, famolavolana sy firavahana ireo sarontava.. Toerana kely izy io nefa feno arabe fivarotana sy atrikasa ny arabe izay amboarina sy amidy daholo ny fomba rehetra.
Amin'ireto atrikasa ireto dia maoderina kokoa, sarimihetsika nentim-paharazana, primitive kokoa, tsy dia maro loko no atao. Amin'ny zava-drehetra. Raha ny marina, misy manodidina Fitaovana 30 samihafa handrafitra ny hazo fototry ny sarontava. Mety ho ity hazo ity hazo ny suar, ny matory, ny hibiscus na ho teak na mahoniana.
Ny ankamaroan'ny sarontava any Bali dia natao ho an'ireo fombafomba atao any amin'ny tempoly, ho an'ireo dihy masina manaitra sy tsara tarehy izay mitantara ny tantara ara-pivavahan'ny Hindoa, ny tsingerin'ny fambolena vary, ny fandresena ny soa amin'ny ranomasina na ny fiainana mihitsy.
Ny famokarana dia zavatra ianaranao avy amin'ny tompony sy ny kanto dia nifindra hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ny mpamantatra dia fantatra amin'ny anarana hoe undagi MATOAN-DAHATSORATRA ary raha mahafeno tempoly ilay sarontava dia tsy maintsy mpikambana ao amin'ny kasta Brahman ihany koa izy io satria io vao mahafantatra ny fombafomba tafiditra amin'ny fanaovana sarontava masina.
Nandritra ny taonjato maro, ny sarontava Bali dia nanana ireny toerana itodiana ireny, ny tempoly ary ireo fety laika, fa nanomboka Tamin'ny taona 60, dia hitan'ny mason'ny fizahantany i Indonezia niova ny zavatra iraisam-pirenena. Nanomboka liana kokoa amin'ny sarontava ireo mpizahatany ary nividy azy handravaka ny tranony izy ireo.
Betsaka ny endriny, be dia be ny tarehy ary maro loko, ka ny fanangonana azy ireo na ny fanantonana maro amin'ny rindrina anatiny dia nanjary tena nirina. Io no lamaody ary raha ny marina zavatra tena tandrefana nanomboka teo tsy mieritreritra ny hanantona an'ireny sarontava ireny amin'ny rindrina ny Bali.
Ho an'ny olona eto amin'ity faritra ity dia saron-tava Baliana ka fahotana ny fampisehoana azy ireo ivelan'ny tempoly. Inona koa, Isaky ny tsy ampiasaina izy ireo dia voatazona ao anaty kitapo landihazo ao anaty ny tempoly misy azy ireo..
Raha mankany Mas ianao dia ho hitanao fa amidy amin'ny fivarotana rehetra saron-tava efatra: sarontava foko Baliana, saron-tànan'olombelona, ​​sarontava biby (saka, sahona) ary saron-tava na demonia izay kosa afaka iray manontolo na ampahany arakaraka ny dihy ampiasana azy ireo.
Miresaka dihy, ny sarontava dia ampiasaina indrindra ao amin'ny nandihy Barong y saron-tava izay maka tahaka ny hetsiky ny Wayan kulit. Ny dihy Topeng dia mitantara tantaran'ny olona ambony, mpanjaka sy mpanjakavavy, ary mety ho vazivazy na misy fanontaniana na fampianarana ara-pitondrantena, fa ny Barong kosa dia manodidina ny ady ataon'ny tsara sy ny ratsy, Barong sy Rangda.
Lehilahy ihany no mampiasa azy ireo ary ireo mpandihy-mpilalao ireo dia tsy mampiasa afa-tsy iray mandritra ny dihy iray manontolo fa maromaro. Indraindray dia a saron-tava iray manontolo, raha fanehoana andriana na mpanjaka ary indraindray dia mampiasa a saron-tava antsasaky na ny iray mahatsikaiky na miaraka amin'ny fisehoan'ny hadalana raha maneho ny endrika tantara an-tsary na clown na raha ny zava-mitranga dia ny fampitahorana ireo aretina.
Afaka miresaka momba ny saron-tava Kras, ny toetra amam-pahefana indrindra, ny saron-tava Old, ilay lehilahy antitra mahatsikaiky izay mananihany vazivazy sy seho an-tsehatra hampiala voly ny mpihaino sy ny saron-tava hanitra, ilay mahery fo tsy iadian-kevitra.
Misy olo-misaron-tava izay mitantara ny tantara misy sarontava eo afovoany, izay mamela azy hiteny, indraindray misy roa amin'izy ireo, ary misy ny mpandihy, ny sasany miady ary ny olona tsy miteny. Ny tontolon'ny fahatsapana ny olombelona rehetra dia soloina soloina ao.
Ny sarontava Barong
ihany koa misy "modely" maromaro fa ny tena malaza dia ny sarontava buffalo, kisoa ary liona. Manana endrika mahatsikaiky izy ireo ary misy sofina na orona voasokitra mihitsy aza.
Efa nilaza izany izahay talohan'izay ny dihy Barong dia momba ny ady amin'ny tsara amin'ny ratsy, an'ny andriamanitra Barong amin'ny ankapobeny manohitra ny andriamanitra Rangda. Avy eo ny saron-tava Rangda Misolo tena ny devoly izy ireo ary manana vava, maso mibontsina ary lela goavambe.
Raha mahita ny iray amin'ireto maska ​​roa ireto ianao dia sokiro tsara, afaka mitentina euro zato vitsivitsy izy ireo satria izy ireo no ela indrindra vao vita. Ny mpanao sary sokitra dia afaka mandany efa-bolana mora foana amin'ilay asa, raha ny sarontava ho an'ny fizahantany dia mila roa volana na latsaka.
Ary mazava ho azy, ny fihenan'ny fotoana fiasana dia miteraka vidiny ambany kokoa nefa mora kokoa ihany koa ny akony satria tsy dia vita hosodoko ary maoderina kokoa ny loko.
Raha zavatra tsotra no tadiavinao ary tokony homena ho fanomezana fotsiny na ho fahatsiarovana tsotra nefa tsy dia sarobidy loatra dia tokony tondroinao ireo saron-tava farany ireo, fa raha zavakanto na fanangonana ny anao dia diniho tsara ireo andinindininy ireo.
Ireo akanjo izay miaraka amin'ny sarontava dia manana ny toerany ihany koa Ary mety ho lafo izy ireo satria ny tanàna iray manontolo dia mandray anjara amin'ny famokarana ary izany dia mitaky fotoana sy fitaovana misy volo soavaly, buffalo na hoditr'osy, nifin'ny biby ary koa, ny loko rehetra dia nateraka voajanahary.
Noho izany, rehefa mankamin'ity faritra an'izao tontolo izao ity ianao ary manaitra anao ny dihy sy ny sarony, dia mila mahatadidy zavatra vitsivitsy fotsiny ianao mba tsy hamerenanao zavatra tena marefo: mitodiha any amin'ny vohitra Mas, mandehandeha eny amin'ny arabe sy ireo lalantsara, tadiavo ny atrikasa mahasarika ary ny mpampianatra no miasa, miresaka aminy, jereo hoe firy ny fitaovana ampiasainy sy ny fomban'ny asany.
Ary hankafizanao ny saron-tarehy Bali!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Bali » Sarontava balinika
Andro fialantsasatra mora vidy any Sardinia